Bulshada Galmudug oo labo arrimood ka dooneysa Qoorqoor | KEYDMEDIA ONLINE
Bulshada Galmudug oo labo arrimood ka dooneysa Qoorqoor
Shacabka Galmudug, oo si isku mid ah u taageeray howlgalka, ayaa sheegay in ay Qoorqoor uga fadhiyaan hirgalinta labo arrin, oo kala ah; (“Dagaaal iyo Doorasho”)
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Siddeed iyo toban bilood ayaa ka soo wareegtay markii loo dhiibay xilka Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug ee ah degaanadda ugu kheyraadka badan Soomaalia. Axmed Cabdi Qoorqoor, hayeeshee, markii ugu horreysay ayaa loo diiwaan galiyay wax qabad aan wali mira dhalin iyo hormar la'aan kaas oo ah howlgalka ciidan ee ka holcaya Koofurta Gobolka Mudug.
Inkastoo, ay jiraan, caqabado cuuryaamin kara miradhalka duullaanka, hadana bulshada Galmudug ayaa ka dhursugaysa, natiijo ku soo idlaata guul, iyo guud ahaan gobolka Mudug oo laga xoreeyo kooxda Al-Shabaab, ka hor inta aan ciidamadu u soo jeesan Galgaduud.
In uusan howlgalku istaagin inta la xoreynayo dhamaan degaannada maamulka ee Xarardheere, Ceelbuur iyo Ceeldheer ugu weynyihiin.
Iyo in uu ka fogaado qorshaha Farmaajo maleegay ee dib loogu dhigayo doorashooyinka, iyadoo loo aaneynayo howlgalkan iyo arrimo la hal-maala. M/weyne Qoor Qoor waxaa lagu xantaa inuu ka cagajiido la dagaalanka Argagixisada Shabaab, lanayahay Saaxiib dhaw M/weyne M.C/llahi Farmaajo iyo Fahad Yasiin.
Duullaanka ka socda Mudug, ayaa ka dhashay dareen bulsho, kadib markii Kooxda Al-Shabaab, ay 27-kii bishaan weerar khasaaro badan dhaliyay ku qaadeen degaanka Wisil, kaas oo sabab u noqday in degaanno badan laga fara-maroojiyo kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida.
Qoorqoor, wuxuu heystaa taageero bulsho, iyo mid caalami ah intaba, oo diyaaradaha Mareykanka ayaa ka qeyb ah howlgalka, wuxuu heystaa ciidan ku filan oo 10 jeer ku jibbaarma Al-Shabaab, taas waxaa loo arkaa farsad dahabi ah oo tagtada u gali karta, isla-markaana uu Galmudug kaga dhigi karo maamulka kaliya ee aysan saldhig ku lahayn Al-Shabaab. Taasi waxaay dhaboobikartaa hadii ay helaan Mekaniyaadkii ay Ciidanku haulgalkooda ku fulinlahaayeen taasna Qoor Qoor ayaa looga fadhiyaa.
Sidoo kale, Axmed Macalin Fiqi, oo ka mid ah siyaasiyiinta firfircoon uguna miisaanka culus degaanka, hadana ah Wariirka Wasaaradda Amniga Galmudug, wuxaa hor taalla fursad dahabi ah, oo taariikh toolmoon iyo tagto loo riyaaqo timaatada danbe uu uga tagi karo.